Amathumbu - Wikipedia
Amathumbu esilwanyana ame okombhobho onjengengobozi ukuze ukutya kunye nenyongo ezivela esiswini zibenakho ukufikelela emathunjini amancinane nakumathumbu amakhulu.
Umzobo obonakalisa amathumbu omntu
Ilungu lokuqala kumathumbu amancinane kuthiwa yiduodenum. Kulapho ke ukutya kusilwa khona zii-enzymes ubukhulu becala. Ngaphezu koko, amathumbu amancinane afunxa izakha-mziba ezibalulekileyo eziphuma ekutyeni okusiliweyo. Oku akwenza ngemisetyana emincinane okanye ngeemfikimfelane zoboya. Zincinane kakhulu ke ezi zinto, ngathi ziinwele kumadonga angapkathi emathunjini.
Amathumbu amakhulu wona akwabizwa ngokuba ngoogqongo. wona afunxa amanzi, nazo naziphi na ityuwa zomzimba ezishiyekileyo. Akwafunxa neevitamins ezenziwe yigut flora emathunjini. Okokugqibela achitha ukungcola akukhuphe ngeempundu.
↑ "Small intestine: biology of the digestive system: Merck Manual Home Edition" merckmanuals.com 2011 [last update] archived from the original on 24 January 2011 retrieved 9 March 2011 Check date values in: |date= (help)
↑ Maton et al, Anthea (1993) Human biology and health Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall ISBN 0-13-981176-1
Last edited on 14 Eye Dwarha 2021, at 18:11
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-14 Eye Dwarha 2021, kwi-18:11